के श्रृङ्खला र सिसनले प्रेम स्विकार गरेका हुन् ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/के श्रृङ्खला र सिसनले प्रेम स्विकार गरेका हुन् ?
के श्रृङ्खला र सिसनले प्रेम स्विकार गरेका हुन् ?
पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा र भ्ल्गर सिसन बाँनियाको प्रेम चर्चा चलेको केही समय भयो । विशेषगरि, श्रृङ्खला मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै गर्दा उनलाई सिसनले खुबै साथ दिएका थिए । यसपछि, श्रृङ्खला र सिसनको प्रेम चर्चा सुरु भएको थियो ।
तर, सिसन र श्रृङ्खलाले आफ्नो प्रेम स्विकार गरेका थिएनन् । सामाजिक संजाल र मिडियामा लामो समयदेखि यी दुइको प्रेमको खबर सार्वजनिक भएपनि यी दुई मौन नै थिए ।
तर, प्रेम दिवसको अवसर पारेर श्रृङ्खलाले सिसनसँगको प्रेम स्विकार गरेकी छिन् । श्रृङ्खलाले लुक्ला पुगेर सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा भनिएको छ–‘सबैलाई प्रेम दिवसको शुभकामना । हामी निकै नै रोमाञ्चक डेमा छौ ।’
श्रृङ्खलाको यो भिडियोको पछाडि सिसन मुस्कुराएका छन् । श्रृङ्खलाले घुमाउरो शैलीमा सिसनसँगको प्रेम स्विकार गरेको वुझ्न सकिन्छ । सायद, यो जोडीले प्रेम स्विकार गर्नका लागि प्रेम दिवसलाई नै कुरेको हुनुपर्छ ।
दीपकले कसलाई भने ‘फटाहा कुरा नगर्नुहोस्’ ?
निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले एक निर्मातालाई फटाहा कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्–‘यस बर्ष रिलिज भएको एक चलचित्रका निर्माताले अन्र्तवार्तामा आफ्नो चलचित्रले १८ करोड व्यापार गरेको दाबी गरेछन् । यस्तो फटाहा कुरा नगर्नुहोस् । भोली कर कार्यलयले भ्याट कती वुझाउनु भयो भनेर प्रश्न गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?’
दीपकले अगाडि लेखेका छन्–‘संकटमा भएको उद्योगलाई झन् संकटमा किन पार्नुहुन्छ ? ९ करोड हो भने ९ करोड भने भैगोनी । गलत डाटा दिएर अनावश्यक आँखाको तारो नहोऔ ।’
दीपकले चलचित्रको व्यापार ९ करोड भएपनि निर्माताले १८ करोड भनेर गलत आँकडा दिएको उल्लेख गरेका छन् । यो बर्ष रिलिज भएका चलचित्रमा ‘जात्रै जात्रा, कबड्डी ३ र छक्का पन्जा’ले मात्र लोभलाग्दो कमाई गरेका थिए । दीपकको यो स्टाटस ‘कबड्डी ३’का निर्मातामाथि लक्षित रहेको वुझ्न सकिन्छ।
लकडाउनको बेला यस्तो अवस्थामा भेटिए अनमोल केसी र सुहाना थापा